Christian Pulisic oo ku haboon kooxda ugu fiican Chelsea, Stamford’s looga dhuminayo oo laftiisa la mamnuucay, ayuu yiri USA Alexi Lalas hore.
Kadib qaab ciyaareed cajiib ah oo uu ku bilowday xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ee premier League, Pulisic ayuu soo gaadhay dhaawac muruqa ah xilli ciyaareedkan isaga oo kaliya ciyaaray 13 kulan tartamada oo dhan.
22 jirkaan ayaa soo laabtay ka hor dhamaadka sanadkii hore, laakiin soo laabashadiisu waxay ku soo beegmeysaa xilli qaab ciyaareedka Chelsea uu xumaaday madaama laga badiyay afar ka mid ah lixdii kulan ee ugu danbeysay.
Kooxda Frank Lampard ayaa 3-1 lagu garaacay gurigooda Man City Axadii, iyadoo Lalas uu aaminsan yahay in Pulisic uu yahay ciyaaryahanka kaliya ee Chelsea.
– Waxaan u maleynayaa in Christian Pulisic uu si fiican u qabtay, ayuu yiri Lalas. “Waan ogahay mararka qaar waxay umuuqatay inuu wax walba iskood iskudayay laakiin wuxuu kubbada ku baasay labo ama seddex ciyaartoy, xawaarihiisa, taabasho gaaban iyo dhamaan.
“Haddii aad daawatay ciyaartii Man City ee Chelsea lagu burburiyey, qof kasta oo ciyaartaas arka wuxuu arki lahaa Christian Pulisic oo Chelsea u soo muuqda
“Waxaan dhahayaa hada Christian Pulisic wuu ka fiican yahay Chelsea, wuu ka fiican yahay Blues.
Tayadiisa ayaa ku lumisay Chelsea haatan iyo ciyaartoyda ay Chelsea haatan heysato. ”